2BR Enkulu 120 sqmSuper Modern Condo Central Patong
Tambon Patong, Phuket, i-Thailand
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Tony
Ngeke uthole indawo engcono enhliziyweni ye-Patong, 50M kusukela ngomhla ka-7/11, Ukuhwebelana Kwemali, Izindawo zokudlela kanye ne-English pub. 100M ukusuka e-Bangla Rd, iphathi edumile yasePatong nendawo yokuzijabulisa. I-150M yenza iJuncylon Shopping Center, inxanxathela yezitolo enkulu kunazo zonke ePatong kanye ne-500M ukusuka ogwini. I-Super Modern 2 BR Condo esitezi esiphansi esinokubukwa kwengadi. Umnyango Wokuphepha onekhodi yomuntu siqu. Ama-air conditioner amakhulu ama-3, insimbi, umshini wokuwasha, isomisi nebhokisi lokuphepha. Indawo Ethule imizuzu emi-5 ukusuka esikhungweni sokuzijabulisa sase-Patong
Ngeke uthole ikhondomu yokuhlobisa elungiswe ngokugcwele yesimanje enhliziyweni yesifunda se-Patong's Entertainment and Shopping. I-120 imitha yesikwele igumbi lokulala eli-2 "Usayizi wenkosi engu-1 kanye nosayizi wombhede ophindwe kabili" olungiswe ngokuphelele ikhondomu yesimanjemanje enegumbi lokugezela elilodwa, umshini wokuwasha nokomisa. Amabhentshi e-granite amnyama ekhishini anomsebenzi we-tile ye-chrome, ukukhanya komphumela wombala oholelekile ekamelweni lokulala kanye negumbi lokuphumula. I-Condominium inoxhumano lwe-fiber ye-inthanethi enokufinyelela kwe-wifi kuyo yonke ikhondomu.
I-condominium inekhishi elihlome ngokuphelele lokupheka. Ihlanganisa nezingilazi, amapuleti, okokusika, iketela, kanye ne-toasterI-condominium ifakwe ifenisha yesimanje okuhlanganisa usofa omkhulu wesikhumba, indawo yokudlela yasekuseni yetafula lekhofi enezitulo zesikhumba ezi-3 nama-TV amaphaneli angu-3, i-Harmen Carmen Bluetooth Somlomo, Ibhokisi Lokuphepha. 3 ama-air conditioner amasha amakhulu athule ukuze uhlale unethezekile. Ikhishi linompompi wamanzi ahlungiwe wamanzi okuphuza.
Ugesi ufakiwe ngakho-ke sicela uvale isiphephetha-moya uma usuka e-Condo.
Esitezi sesi-8 kunedamu lokubhukuda elisophahleni elinemibono yePatong nolwandle. # Sisanda kusayina inkontileka yokuvuselela i-swimming pool futhi mhlawumbe singasebenzi amasonto amathathu #
Ibhilidi linokufinyelela kwekhadi likakhiye wokuvikela futhi umnakekeli wesikhathi esigcwele ukusayithi 24/7.
Umnyango wangaphambili uvikelwe ilokhi yekhodi yobuciko ezohlelwa ngekhodi eyingqayizivele ezosebenza kuphela ngokuhlala kwakho okukunikeza ukuthula kwengqondo.
Sicela ufunde ukubuyekezwa kwethu kwesivakashi. Inani elimangalisayo lemali enhliziyweni yesifunda sasePatong's Entertainment, Shopping and Restaurant!
I-HDTV engu-55" ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, I-Netflix
4.94 ·173 okushiwo abanye
I-Condominium itholakala kuphela ngamamitha ayi-100 ukusuka ezindaweni zokuzijabulisa nezokuthenga. Ngemva nje kwe-Gig Hotel futhi wabelane nge-Soi ne-The Yorkshire English Pub, inkundla ye-Bungla Boxing uhambo olude lwesifunda se-Bangla Rd Entertainment. I-Joncylon Shopping Centre. 7/11 kanye ne-Family Mart. 500m ukuhamba ngezinyawo ukusuka ePatong Beach. 50m ukusuka ezindaweni zokudlela nezitolo. 100m Bansarn Night Food Market. 75m endaweni yokudlela yomndeni wakwa-Mac Donalds. 50m ukusuka ezitolo zokubhucunga. 50m kusuka ezindaweni zokudlela zama-Arabhu 50m ukusuka ku-Atm, Money Exchange. 50m ukusuka kumatekisi, amaTukTuks, amadeski okuvakasha nezithuthuthu.